Dhaxalkii Cali-Banfas! WQ. Barkhad Kaariye |
Dhaxalkii Cali-Banfas! WQ. Barkhad Kaariye
Hargeisa(GNN):-Wakhtiyo inta badan kollayba aan mashquul ku ahay shaqo, ayuu telefoonkayga gacantu dhawaaqay. Waxaan arkay in uu yahay qof inta badan wakhtiyadaas shaqada aanan uga baran in aanu wada hadalno, sababtoo ah, labadayaduba waa noo wakhti shaqo. Hagayaasha dareennadu waxay maskaxda u gudbiyeen in ay jirto arrin keentay in ay inay telefoon igala soo hadasho. Markii aan telefoonkii qabtay, ayay bariido ka dib I tidhi, “Ma garanaysaa waxaan helay ee aan kuu soo garaacay?” “Maya!” ayaan ugu jawaabay anigoo kollay ba filaya in waxaasi ay muhiimad gaar ah leeyihiin. Salaasa, 20 Oktoobar 2015, ayay ahayd. Iyadoon ii sheegin waxay tahay rasmiyan, ayaannu ku ballanay in ay ii keento oo aan ka guddoomo. Fiidnimadii ayay Huda Cali Xasan (Huda Banfas) sidii ballanku ahaa goobtii ballanka timi. Kollay ba ma filaynin alaab shandado lagu jiidayo oo qaro ahaan wayn, waxaanse filayay alaab muhiimad ahaan culays badan! Sidii bay noqotay! Waxay ii soo fidisay gal warqadeed waxaanay ii raacisay, “Anigoo maanta buugaag kala guraya ayay hadyaddaasi igaga soo dhex baxday!” Haa, waa hadyad! Wallaahi mayee ka qiimo badan! Haddii akhriste dadka qaarkood hadyadda u yaqaannaan agab duuban oo la daboolay, hanti maalmo iyo muddooyin la isticmaalo amma waxyaabo la mid ah, tani way ka duwan tahay oo ma duugoowdo abid!
Intaan asxaabtii kale ee nala joogtay iyo Huda ba kala durkay, ayaan meel halkeer ah la tegay oo aan furfuray galkii oo waxa igaga soo baxday warqad! Dusha sare waxa ku xardhan bisinka iyo magaca Allaha wayn oo far qurux badan oo aad garan karto in macallin qoray lagu qoray. Waxa ku hoos qoran taariikh markaan arkay ay xusuusta dib iigu celisay halkaannu joognay iyo madashaannu ku sugnayn, waa 27/09/2012. Maalintaas iyo maalmo kale oo ka horreeyay ba way astaysnaayeen ee xusuusta aan dib idiinku celiyo halkaanu joognay; waxaannu ku sugnayn magaalada Addis-Ababa ee dalka Itoobiya. Muddo lix maalmood ah ayaanu markaa joognay oo waxay sugayeen isaga iyo koox uu ku jiraa dal-ku-galka dalka Ingiriiska oo ay kaga qaybgalayeen toddobaadka Somali Week Festival. Aan dib u celinta xusuustaas idiinku sheego qoraalkan kooban ee aan ka soo garoocday qormada ‘Safarkii Cibrada’ oo aan hore u qoray idiinku sheego;
‘Marxuum Cali-Banfas waxaan waydiiyay sida uu magacu ugu baxay, “Waxaan kaalinta koowaad galay tartan la odhan jiray; bandhigga fanka iyo suugaanta oo loo soo gaabiyay banfas, kaas oo qabsoomay sanadkii 1976-kii. Sidaa darteed, markii aan kaalintaa ku guulaystay ayuu magacii tartanku I raacay oo Banfas la ii bixiyay,” ayuu igu yidhi Ilaahay ha u naxariistee. Marxuumku wuxuu ii sheegay in suugaantiisa lagu wado hormayn. Inkasta oo uu suugaan badan lahaa, haddana waxaan si gaar ah u xusuustaa gabayga Gelbis oo ahaa kii uu kaalinta koowaad ku galay markii tartankaa Banfas qabsoomay oo uu iiga sheegay intii ka khusaysay sheekadii aanu habeenkaa wadnay oo ahayd nolosha, guurka iyo is-fahamka dadka. Waxaan ka xusuustaa tuducyadii uu habeenkaa mariyay intii aanu sheekada wadaagaynay;
Gobannimo waw dhalashee,
Ninkaan gadanin iimaanka,
Gabadhiisu meeshay martaba,
Gacalku waw sahane,
Gaban yarooy is-jeclaadeen,
Hadduu meher ku gaw siiyo,
Garabiyo wuxuu maal hayuu,
Gabaygaasi iyo suugaan kale oo uu marxuumku ila wadaagay, waxa ka muuqda indheer-garadnimo iyo saadaal run ku aroorta oo la xidhiidha dhinacyada nolosha, kuwaas oo qaarkood konton sanno ka hor uu tiriyay, balse aad mooddo in uu maanta ka hadlayo.
Aynu dib ugu noqonno hadyaddii ay ii keentay Huda Banfas.Warqaddii ayaan hoos u sii eegay oo aan akhriyay. Markaan dhammeeyay akhrinteedii, ayaan ku war helay qofka I dul taagan. Yaasmiin oo ah xaaskayga oo ka mid ahayd kooxdii aan tiigsin in le’eg ka goostay, ayaa ila hadlaysay oo aanan maqlayn! “Maxaa ku helay?” ayay I waydiisay. “Warqaddan baa I heshay!” baan ugu jawaabay. Sidii oo ay cidi iga arkayso ayaa intaan yareeyay oo aan duubay koodh aan xidhnaa jeebka sare geliyay. Waxaan ogaaday in marxuum Cali-Banfas uu rumeeyay ballan uu qaaday, waliba kaligii ma qaadine ay wadar ku qaadeen, nasiib-darro se ilaahay aanu qorin in aan ka guddoomo isaga, kamase walaacsani oo qof mudan in uu metelo ayaan ka guddoomay oo waliba anigoon ogayn ‘dhaxalkaas’ ii keentay. Waxaan rumaysnahay in aad isweydiinaysaan wixii warqaddaasi ku qornaa. Wixii ku qornaa hoos baan idinkula wadaagayaa, waxaadse akhriste sawirataa macallin, abwaan iyo waayo-arag aad in badan wakhti soo wada qaadateen. Aan dib ugu noqdo qormadii ‘Safarkii Cibrada’ oo haddana intan ka soo qaadano;
‘Way jiraan oo waliba buuxaan in badan oo bulshada ka mid ah, haldoorka umadda iyo acyaanta dalkaba ah oo aqoon dheer iyo saaxiibtinimo fogba u lahayd marxuumka, hase ahaatee, waxaan anigu ka sheegi karaa intii aan ka bartay muddo bil ah oo aanu wada joognay, jid wada marnay, jidiinna wada cunnay.
Intii aanu joognay Addis-Ababa oo wali ay sii taagan tahay ooygii geerida Faysal Cumar, ayuu si kedis ah u xanuusaday Allahaa u naxariistee, marxuum Cali Xasan (Banfas). Waxa uu laba habeen dhakhtar u galay xanuunkaas. Runtii walaac hor leh ayuu xanuunkiisaasi nagu beeray intayadii la socotay, ehelkii iyo asxaabtii toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee London oo si aad u sugaysay. Xidhiidhka telefoonka iyo xog-waraysiga la xidhiidhay xaaladdiisa caafimaad xilli walba way taagnayd. Inkasta oo uu Ilaahay caafimaad siiyay oo uu ka kacay xanuunkaas, haddana 17-kii Oktoobar 2012, ayaan goor duhur ah anigu uga soo amba-baxay dhinaca magaalada Hargeysa, sababtoo ah, hawlahooda safar oo aan u dhamaystiray. Waxay ku qornaayeen diyaaradda inay fiidnimada maalintaas u duulaan dhinaca London. Nasiib-darro, markii aan Hargeysa ku soo laabtay, ayaa subaxnimadii la ii sheegay in uu si kedis ah ugu soo booday faalig saf-mar ku noqday markii dambe intii uu diyaaradda la sii socday. Walow walaacu ahaa mid la wadaagayay, haddana waxa gaarkooda culays u saarnaa kooxda marti-qaadka u fidisay ee Kayd Cultural Organization iyo asxaabtii ku sugaysay London. Ilaahay baa ka kiciyay. Waxa dubaaqayga iyo damiirkayga taabtay in aananu dib isu arag marxuumka sidii uu uga soo noqday London sanadkaas oo uu muddo bilo ah ku maqnaa, maadaama uu bukay na uu kaga hadhay abwaannadii kale oo soo laabtay. Safarkaasi wuxuu ahaa safar ku-cibrasho qaadasho mudan runtii. Wuxuu ahaa safar in badan ii kordhiyay, in badan oo kale na aan ka dhaxlay.’
Ka warrama qofka aad waayahaas soo wada qaadateen? Maalintaas ayuu igu yidhi, “Duco iyo erey wixii aan odhanayo, waan odhan doonaa!” Ballankaas uu qaaday buu oofiyay. Waa laga yaabaa in qalinkayga iyo qoraalkayga in aan ku soo gudbiyo laga wacnaa, waxaanse gartay in ay mudan tahay sheegmo – sidaan u dareemayo na loo sheego. Waxaan garwaaqsaday in malaha haddii qof kale qori lahaa, aannay igu fillaateen habkuu u gudbiyaa! Waxa la-yaab iyo xusid ba mudan in wakhtiga ay uu qoray ay ka soo wareegtay muddo saddex sanno ah, wakhtiga ay I soo gaadhay na ay ku beegan tahay sannad-guuradii labaad ee ka soo wareegtay geerida marxuum Cali Xasan Aadan (Banfas).
Dhaxalkii Cali-Banfas ee warqadda ku qornaa waa maansadan hoos ku qoran;
Sawjaddaadu waa bilan,
Awlaad kheyr leh oo badan,
Allaa bixin karaayoo,
Aanu kuu baryaynaa,
Ku badhaadh adduunyada,
Iyo beydka raaxada,
Beeraha ku yaallee,
Boqorku ugu talogalay,
Kuwaan rusushii beenayn,
Ee bogay xaqiisiyo,
Diintii loogu baaqee,
Sida maalintii Beder,
Dagaallada ka biqinee,
Baal joogay Nebigee,
U beer dhigay jahaaddada,
Naftooday u bixiyeen,
Inaan diintu beylihin,
Bushaaraysta lagu yidhi,
Beddelkiinu waa guul,
Adna beerka taa geli.
Kaama baaqatee abid,
Adigoo ku biiroo,
Ka badbaaday naaraha,
Belo naga xijaabane,
Barkhadeey na soo gaadh,
Safarkaan u baxaynana,
Baawar Eebbe nagu sii.
Allaahu Akbar! Xilliga uu warqadda qoray ee ku suntan saddex toddobaad ka dib, ayay u amba-baxeen dhinaca magaalada London oo ay kaga qaybgaleen toddobaadka dhaqanka Soomaalida.
22 Oktoobar, 2015